Magweta emakambani anobatsira kambani yako | Law & More BV
Somutengesi, iwe pasina mubvunzo unofanirwa kubata nemhando dzese dzezvinhu zvepamutemo. Magweta edu emakambani ane maonero akataridzika uye anogona kukurayira nekukubatsira iwe pazvinhu zvine chekuita nebhizimusi.
> Tailor-yakagadzirwa pamutemo kutsigirwa
> Chipangamazano wezvemitemo
Somutengesi, iwe pasina mubvunzo unofanirwa kubata nemhando dzese dzezvinhu zvepamutemo. Magweta edu emakambani ane maonero akataridzika uye anogona kukurayira nekukubatsira iwe pazvinhu zvine chekuita nebhizimusi. Zvinyorwa zvinotevera zvinogona kutariswa:
• kuumbwa kwenhengo yepamutemo;
• kubatsira mukutarisira kwemakambani;
• zvinogona kubatanidzwa uye kuwanikwa;
• kuita nekushingairira pamutemo kukodzera;
• kunyorwa uye kuongororwa kwezvibvumirano;
• yemitero zvinhu mukati mekambani.
Kuwedzera kune emakambani emutemo masevhisi, Law & More inopawo masevhisi ese aungatarisira kubva kubazi rezvemitemo. Isu tiri mumwe wako anotararira kana zvichidikanwa, tipe zano repamutemo uye kumisidzana pamhepo pazvinenge zvakakodzera.
Tailor-yakagadzirwa pamutemo kutsigirwa
Mabhizimusi kazhinji inyaya yekuita nguva. Izvo zvakakosha kuti uverenge nekukurumidza kutsigirwa kwemutemo. Nyanzvi pa Law & More kupa rutsigiro rwepamutemo rwekambani yemutemo, apo panguva imwechete uine ruzivo rwakakosha uye kuziva-kwegweta. Unogona kufonera kuhofisi yedu kuti ubatise timu yako yevanopinda-mumagweta, tinogona kukuitira mabasa iwe semagarire-mumba magweta kana unogona kufonera mushandi we Law & More yepurojekiti, kuvhurika kwebasa kana kusavapo kwenguva refu kwegweta riri mumba. Izvi zvinogonesa Law & More kupa rubatsiro rwakanangana nemutemo.
Kwete chete kuti isu tinozivisa kesi munguva yakanaka, asi isu tinopawo zvese zvibvumirano zvinodiwa. Izvi zvinodzivirira matambudziko mune ramangwana uye kuderedza mukana wehurefu maitiro kune zvishoma. Kana maitiro akazoitika kuti ave asingadzivisiki, saka isu tine ruzivo rwepamba kukubatsira iwe. Sewemabhizimusi, iwe unogona ipapo kutarisa zvizere pane bhizimusi. Pamwe chete newe, tinonzvera mamiriro ezvinhu uye tinosarudza matekiniki. Iwe unofarira mabasa egweta remakambani? Wobva wabvunza magweta emakambani pa Law & More.